နူရီယာ | | အိမ်စီးပွားရေး, အစိမ်းရောင်အိမ်, ပြန်လည်
မိုးရေတွင်အရည်အသွေးအမျိုးမျိုးရှိပြီး၎င်းကိုအိမ်တွင်းအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။ မိုးရွာသွန်းမှုနည်းသောပြည်နယ်တစ်ခုတွင်သင်နေထိုင်ပါက၎င်းကိုအသုံးချနိုင်သည် စုဆောင်းပါ ဤရေကိုနောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုရန်သည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ ရေစုပ်စက်တစ်လုံးကိုဟင်းလင်းပြင်ထဲတွင်နေရာချပြီးမိုးရွာစေနိုင်သည်။ စံနစ် နှင့်မှလာသည့်မိုးရေကိုစုဆောင်းပါ ခေါင်မိုး သင့်အိမ်မှ
သင်၏ခေါင်မိုးပေါ်သို့ကျသောမိုးရေကိုဖြတ်သန်းနိုင်သည် ရေနံချောင်း ကြောင်းဒါဖုံးလွှမ်းကွန်တိန်နာမှညွှန်ကြားခဲ့သည် ဂီ မညစ်ပတ်ပါစေနှင့်။ ကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအလှဆင်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းစွမ်းရည်သည်သင်ပေးမည့်အသုံးပြုမှုနှင့်သင်၏မြို့တော်တွင်များသောအားဖြင့်မိုးရေပမာဏပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါဟာထားရန်လိုအပ်ပါသည် ရေစစ် အရွက်နှင့်အခြားအစိုင်အခဲအကြွင်းအကျန်များနှင့်အခြား filter ကိုဆံ့ရန်တိရိစ္ဆာန်များဝင်ရောက်မှုတားဆီးရပေမည်။
တခါ အပျငှေ သင်လိုအပ်သောအိမ်၏နေရာများသို့ဖြန့်ဝေရန်ကွန်ယက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မူလအိမ်ကွန်ယက်အတွက်ဖြည့်စွက်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သင့်သော်လည်းမရောနှောသင့်ပါ။ တိုင်ကီရှိရေများကုန်သွားသောအခါ switch သည်ပုံမှန်ကွန်ယက်မှရေကိုလည်ပတ်စေလိမ့်မည်။ မိုးရေကွန်ယက်၏ဒီဇိုင်းကိုသင်အသုံးချလိုသည့်အိမ်ရှိနေရာများသို့ညွှန်ကြားသည်။ bomba။ ဤကိရိယာများကိုရောင်းချပြီးတပ်ဆင်သောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်သင်ရေပိုက်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဗဟုသုတရှိပါကသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဒီရေ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းပြီးအခမဲ့၊ ထုံးအခမဲ့ဖြစ်သည်, နှင့်၎င်း၏စုဆောင်းခြင်းချဲ့ကားတွက်ချက်ကုန်ကျစရိတ်မထင်ထားဘူး။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုများသောအားဖြင့်ရည်ရွယ်သည် အနံ့, အဝတ်လျှော်စက်၊ ပန်းကန်ဆေးစက်၊ ရေကူးကန်များအတွက်ရေ၊ အိမ်တော်နှင့်ငါတို့စေ၏ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ (အပင်များနှင့်သစ်ပင်များ) နှင့် သစ်ပင်များ မိသားစုပိုဖြစ်လိမ့်မည် ရေရှည်.
များသောအားဖြင့်မကြာခဏများပြားစွာရွာသွန်းသော Galicia ကဲ့သို့သောပြည်နယ်များတွင်မိသားစုများစွာသည်သူတို့၏အိမ်များတွင်မိုးရေကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းစနစ်များတပ်ဆင်ပြီးငွေစုဆောင်းမှုကိုရရှိသည်။ 50 ရာခိုင်နှုန်းသောက်သုံးရေပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း » အိမ်စီးပွားရေး » မိုးရေရဲ့အားသာချက်ကိုဘယ်လိုယူမလဲ